Laacibka Kooxda Real Madrid Ee Karim Benzema Oo Loo Magacaabah Laacibka Ugu Fiicnaa Yurub Xilli Ciyaareedkan
HomeWararka CiyaarahaLaacibka kooxda Real Madrid ee Karim Benzema oo loo Magacaabah laacibka ugu fiicnaa Yurub xilli ciyaareedkan
May 31, 2022 Wararka Ciyaaraha, Horyaalka Spain 0
Weeraryahanka Real Madrid Karim Benzema ayaa loo magacaabay ciyaaryahanka ugu fiican Yurub xilli ciyaareedka 2021-22 Abaalmarinta Akhristayaasha Mole Readers.
Laacibka reer France ayaa ku riyaaqay olole shaqsiyadeed oo cajiib ah garoonka Bernabeu, isagoo dhaliyay 44 gool, wuxuuna caawiyay 15 kale kaliya 46 kulan oo uu saftay tartamada oo dhan.
Waxa kale oo jirtay guulo la taaban karo oo kooxeed uu gaadhay Benzema isaga oo ka caawiyay Madrid in ay ku guulaysato horyaalka La Liga iyo Champions Leaque-ga, isaga oo dhaliyay 15 gool 12 kulan oo uu u danbeeyay oo ay ku jirto qaab ciyaareed xidhiidh ah oo uu ku soo guulaystay wareegii 16-aad.
Qaab ciyaareedka Benzema ee xilli ciyaareedkan ayaa keentay inuu u soo baxo musharaxa ugu cad cad ee u tartami doona abaalmarinta Ballon d’Or, waxaana uu guul muhiim ah ka soo hooyay abaal-marinteena dhamaadka xili ciyaareed kaan oo sidoo kale loo magacaabay xiddiga ugu fiican Yurub.
34-jirkan ayaa helay 60.3% codadkii la dhiibtay – ilaa hadda waa farqiga ugu weyn ee guusha mid kasta oo ka mid ah qaybaha.
Ciyaaryahanka ugu dhow ee Benzema ayaa ahaa weeraryahanka ku biiray Manchester City Erling Braut Haaland , kaasoo dhaliyay 29 gool isla markaana caawiyey sideed 30 kulan oo uu saftay tartamada oo dhan Borussia Dortmund .
Haaland ayaa wali ku guulaysata in uu helo 9% codadkii la dhiibtay, inkasta oo uu Liverpool Mohamed Salah ku guulaystay 7.5% codadkii la dhiibtay.